Akụkọ - ụgbọala na -adọkpụ ala dị ala
1. Ejikọtara ihe owuwu ahụ na ụdị onye ọrụ, yana imewe ezi uche nwere ike belata ịdị arọ nke ụgbọ ala n'okpuru ọnọdụ ibu. Ọdịdị a dị nfe yana ọdabara, na mwepụ ahụ dabara adaba, nke nwere ike belata ọnụ ahịa itinye ego maka onye ọrụ wee mepụta uru uru ọzọ.
2. Ogwe ntụpọ ọkara na -adọkpụ: oghere okirikiri nwere osisi ogologo yana ihe jikọtara ya site na osisi. Ọ nwere ike itule ike, rigidity na hardness nke etiti, na ike amị ikike na ọ dịghị deformation.
3. Ogwe ụgbọ ala na-adọkpụ ụgbọ ala nke na-adọkpụ ụgbọ ala bụ nke osisi site na ihe owuwu, na ogologo osisi ogologo na-anabata ụdị kwụ ọtọ ma ọ bụ ụdị gooseneck. Ogologo weebụ dị site na 400 ruo 500, a na -ejikọ ụdọ ogologo ya site na ịgbado ọkụ arc na -akpaghị aka, a na -agba okpokolo agba ya, a na -abanyekwa osisi obe n'ime ogologo ogologo ya na welded n'ozuzu ya.
4. Usoro nkwusioru: a na -eji usoro nkwusioru ọhụrụ anabata ike dị elu na nguzogide mmetụta siri ike; ibu nke axle ọ bụla na -ahazi nke ọma, a na -ahazi akụkụ nke sistem mkpanaka. N'ịgbasa mkpọtụ ugboro ugboro, a ga -ebelata oghere nke esemokwu dị n'etiti taya na ala, a na -ebelatakwa taya ahụ nke ọma. N'otu oge ahụ, enwere ike ịhazigharị mkpanaka ahụ iji mezie ụkwụ ụkwụ, ka ị wee nwee ike zere ihe dị iche iche nke na -abata n'ime ma na -adọkpụ taya.
N'ịchịkọta, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya banyere ụgbọ ala na-adọkpụ ọkara na-adọkpụ n'ime ndụ anyị, enwere m olileanya na ị ga-aghọta nke ọma, ịmatakwu ihe banyere ụgbọ ala na-adọkpụ ọkara, ị nwere ike ịga n'ihu na-etinye uche na ịghọta, ma ọ bụrụ na ịchọrọ Ndị enyi gwongworo na-adọkpụ ụgbọ ala nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla maka ndụmọdụ.